Wuxuu yiri: ”Waxaan rumaysnahay in guushaydu ku jirto walaalkayga Soomaaliyeed JABKIISA!” | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Wuxuu yiri: ”Waxaan rumaysnahay in guushaydu ku jirto walaalkayga Soomaaliyeed JABKIISA!”
Wuxuu yiri: ”Waxaan rumaysnahay in guushaydu ku jirto walaalkayga Soomaaliyeed JABKIISA!”
(Hadalsame) 11 Luulyo 2019 – Waxaan rumaysnahay in guushaydu ku jirto walaalkayga Soomaaliyeed jabkiisa. Waxaan is iri ma noolaan kartid mana horumari kartid inta reer hebel magac iyo muunad haystaan. Awoowahay ayaa sidaas rumaysnaa. Awoowahay nolol kale ma lahayn aan ka ahayn u dareenqabka reer hebel. Maalinta uu reer hebel ka sare maro wuxuu gaarayey meeshii uu u socday markii ay ka sara maraanna wuxuu bilaabi jirey soo kicitaan iyo rogaalcelis. Noloshiisu intaasay ahayd. Noloshayduna waa isla intii uun.
Awoowahay wuxuu ii sheegay inaan weligood laga adkaan. Xataa haddii hal maalin kun laga diley. Xataa haddii xoolihii oo dhan laga qaaday. Xataa haddii dhulkii laga saaray. May. Weligood ma aqbalin in laga adkaaday. Aniguna intaas ayaan baarlamaanka iyo dawladnimada la soo galay. Intaasaan computer iyo internet u helay.
Aniga iyo tolkay isku saf ayaan ku jirnaa. Degaamada kala duwan, heerarka aqoonta iyo shaqooyinka kala duwan ee tolku wax kama bedelaan hawsha loo dhan yahay oo ah u dareenqabka beelaha ‘cadawga’ ah. Shiikheena mixraabka fadhiya, xildhibaanka Golaha Shacabka noogu jira, wiilkeenna Liibiya ku xiran, keenna Silicon Valley ka shaqeeya iyo wiilka hadda geela ka carraabinaya dooxada reerku dego isku meel ayey dhufayska kaga jiraan. Isbedelada dunida ka dhacayaa nama bedelaan.
Magaca guud ee Soomaaliyeed xil igama saarna. Waa mid loo dhan yahay. Waxaan rumaysnahay in ninkii aan tol lahayn iyo masaakiintu ka sheekeeyaan Soomaalinimada.
Haba la i dullaysto oo magaca Soomaaliyeed ee aan ku suntanahay ha ku ciyaaraan Carab iyo Cajam oo markii la i arko ha la xasuusto baahi iyo burbur. Dhib ma leh, waayo waxaa loo dan leeyahay Soomaalida kale oo aniga iyo qabiilkayga maaha waxa laga hadlayaa marba haddaan magaca qabiilkayga la sheegayn.
Hargeysa cadawgeedu waa Xamar, Xamar cadwgeedu waa Garoowe, Garoowe cadawgeedu waa Cadaado, Cadaado cadawgeedu waa Kismaayo, Kismaayo Cadwgeedu waa Baydhabo. Guushayda waxaan ku qiyaasaa oo artan ugu jiraa inaan ka adkaado oo ka hormaro Soomaalida kale.
Markii qolo horumar sheegato kuwa kalaa wadnaha lagu dhuftaa. Kii horumar gaaraana wuxuu u faanaa kuwa kale. Wax la isuma oggola oo in wax la wadaago lama oggola oo in la kala sarreeyo lama oggola. Jiilka hadda koraya waxay noloshooda ku qaadan doonaan wixii aan annagu u diyaarinnay oo ah ‘cadawgiinna u dareenqaba’.
Haddaan la oggolaan in reer kale taliyo oo weliba eex walaal loo dulqaadan, wallee dulligaas laga bixi mayo. Caddaalad heli maysid ilaa aad Ilaahay hor tagtid. U dulqaado walaal Soomaaliyeed inuu kuu taliyo, ha aqbalin dulmi iyo eex laakiin jawaabtaadu yaanay keenin dhibaato ka weyn eexda aad ka gadoodday, sida aan haddaba aragnay.
Previous article”Iska jira tillaabo khaldan!” – Turkiga ka jawaabey hanjabaadda Maraykanka
Next articleXeel ay Wasiirrada Puntland u degeen RW Khayrre oo la ogaadey (Jadwalkii oo aan helnay)